Muqdisho: Mas’uuliyiin oo cambaareeyay dil arxan darro ah oo ka dhacay – idalenews.com
Mas’uuliyiin hore uu kamid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa cambaareeyay fal arxan darro ah oo loo geystey mid kamid ah dadka rayidka ah ee degen magaalada Muqdisho.
Taabit Cabdi Maxamed guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa bartiisa Twitterka ah waxa uu ku sheegay inay tahay wax laga xumaado dilka loo geystey Allaha u naxariistee Marxuum Axmed Mukhtaar Saalax.
Sidoo kale mas’uuliyiinta ka fal celisay dilka naxariis darada ah ee lagula kacay Axmed Mukhtaar Saalax ayaa waxaa ka mid Wasiirkii hore ee Wasaarada Gargaarka & Maareynta Masiibooyinka Maryan Qaasim iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ciidamada Booliska ayaa la sheegay in dilka Allaha u naxariistee Axmed Mukhtaar Saalax ay dad u qabteen ayna baaritaan ku sameynayaan.
Allaha u naxariistee Marxuum Axmed Mukhtaar ayaa lagu diley magaalada Muqdisho gaar ahan xaafadda Towfiiq ee degmada Yaashiid kadib markii ay weerar ku soo qaadeen rag iyo dumar oo sitay Baankado iyo Basiin kuwaa oo la sheegay in ay isku heyb ahaayeen Gabadha ay is jeclaadeen wiil uu adeerka u ahaa marxuumka.
Falkan argagaxa leh ayaa waxaa uu qabsaday baraha bulshada iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ku muujiyeen dareenkooda,waxayna dadka ku tilmaameen inuu ahaa mid aanay ahayn caadada Soomaalida waxayna ku baaqeen in sharciga la horkeeno dadka ka dambeeyay falka.